Ny Tolon’ny Kiobàna Mpifindra-monina Mihoatra Ny Arivo Tafahitsoka Tao Amerika Afovoany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2015 3:15 GMT
Sarin'ny Kiobàna mpifindra monina tafahitsoka tao amin'ny sisintany manasaraka an'i Costa Rica sy Nikaragoa, nozaraina tao amin'ny media sosialy.
Kiobàna manakaiky ny 1.500 nanantena ny ho tonga any Etazonia no hita tsy nisy mpiraharaha tao anelanelan'i Costa Rica sy Nikaragoa, taorian'ny nandavan'io firenena farany io ny hidiran'izy ireo, nahatonga olana ara-diplaomatika sy amin'ny maha-olona tao Amerika Afovoany.
Tamin'ny 2014, Kiobàna mitotaly 20.384 no tody na niezaka ny ho tonga tany Etazonia. Araka ny angon-drakitra nangonin'ny gazety miseho isanandro The Miami Herald, 17.459 no niampita ny sisintany Meksikana, 814 niantsona an-tanety tao Florida, ary 2.111 no voasakana tao amin'ny elodrano 150 kilometatra manasaraka an'i Kiobà sy Etazonia.
Nanan-kery hatramin'ny 1996, ilay Lalàna Fanitsiana Kiobàna, fantatra koa amin'ny antsoina hoe politikan'ny “tongotra lena, tongotra maina”, no manome fahafahana ny Kiobàna izay tonga any Etazonia mba hahazo visa amin'ny asa sy tombontsoa isan-karazany: fifanarahana “miavaka” tsy mety ho azon'ny mpifindra monina hafa firenena.
Mandrakotra efa ho 8000 kilometatra ny làlana an-tanety, izay malaza indrindra ihany koa, ary toy izao:
Ny làlana izoran'ny vahoaka Kiobàna. #QuePasenLosCubanos [Avelao hiditra ny Kiobàna]
Nandray fiaramanidina tany Ekoatora io vondrona io, izay tsy nitakiana fahazoandàlana hiditra, ary niampita an'i Kolombia talohan'ny nandehanany namakivaky an'i Amerika Afovoany. Tena tsy zava-baovao ao amin'ny faritra ny dian'ny mpifindra monina. Na izany aza, nandà ny fidirana ho an'ny Kiobàna efa ho 1.800 tamin'ny Alahady lasa teo, 15 Novambra, ny governemantan'i Nikaragoa, nanamafy ny sisintaniny, ary nampiasa fomba mahery vaika toy ny baomba mandatsa-dranomaso sy bala fingotra mba handroahana azy ireo.
Nandefa ny lahatsary tao amin'ny Facebook ny fantsom-baovao CB24.tv, fotoana fohy taorian'ny nandehanan'ireo Kiobàna mpifindra monina ho any amin'ny sisintany misy ny mpitandro filaminana, miaraka amin'izao famaritana manaraka izao:
Kiobàna 1.100 no hita tsy voafehy teo amin'ny sisintany manasaraka an'i Costa Rica sy Nikaragoa. Nilaza ny tafika Nikaragoaiana fa “tsy hamela ny olona tsy misy taratasy ho ao amin'ny firenena, ary nanamafy noho izany ny sisintaniny atsimo tamin'ny andia-miaramila mandeha an-tongotra.”
Mihevitra ve ianareo fa tokony hanao izany ny manampahefan'ny firenena tsirairay avy?
Pikantsarin'ny lahatsary navoakan'ny CB24.tv tao amin'ny Facebook izay mampiseho Kiobàna mpifindra monina mandeha mankany amin'ny sisintany. Tsindrio ny sary hijerena ny lahatsary ao amin'ny Facebook.
Araka ny tatitry ny mpanao gazety, tafahitsoka herinandro maro tao amin'ny sisintanin'i Panama sy Costa Rica ilay vondrona talohan'izany, mandra-paneken'i Costa Rica ny fidirana vonjimaika rehefa avy nandrava ny ‘coyote’ na tambazotra iray mpanao varotra an-tsokosoko. Mitaky ny hananan'ny Kiobàna fahazoandàlana i Nikaragoa raha hiditra ny firenena.
Milaza ny governemanta ankavia an'ny filoha Nikaragoaiana Daniel Ortega fa tsy tena mampiseho fahalinana amin'ny famahana ny olana i Costa Rica, fa ny mifanohitra amin'izany, amin'ny fandrisihana izany amin'ny alalan'ny famoahana fahazoandàlana fanampiny.
CubanetNoticias: Asa “fiarovana” ny nandroahana Kiobàna mpifindra monina , hoy ny Praiminisitra Nikaragoaiana …
Notaterin'ny gazety miseho isanandro La Nación fa niantso ny firenena mpifanolo-bodirindrina mba “handray fepetra iombonana” momba ny Kiobàna mpifindra monina ny Minisitry ny Raharaham-bahinin'i Panama, Isabel de Saint Malo Alvarado.
Miaraka amin'ny sarin'ny mpifindra monina sy mpitsoa-ponenana an'arivony avy any Afovoany Atsinanana miezaka hanatratra an'i Eoropa vaovao, naneho ny tsy fahafaham-pony amin'ny governemanta Amerikana Afovoany ny olona tamin'ny alalan'ny tenifototra #QuePasenLosCubanos (Avelao hiditra ny Kiobàna).
#Ortega tsy #Nicaragua. Miraharaha ny Nikaragoaiana ary tiantsika mba hamela ny Kiobàna hiditra izy ireo.
Fahavalon'ny ny asa fanaovana gazety malalaka, mandroaka ny ambara ho mpifindra monina “tsy misy taratasy” … tsia, tsy i Donald Trump izany, fa i Daniel Ortega. Avelao hiditra ny Kiobàna.
Fahazoandàlana amin'ny maha-olona ho an'ny Kiobàna! Mpifindra monina avokoa isika rehetra! Avelao hiditra ny Kiobàna.
Mandritra izany fotoana izany, namoaka ity fanambarana manaraka ity ny minisitry ny raharaham-bahiny ao Kiobà:
Niala ara-dalàna tany Kiobà ireo olona ireo mba ho any amin'ny firenena hafa ao Amerika Latina, nanaraka ny fepetra rehetra napetraky ny fitsipika Kiobàna momba ny fifindra-monina. Tamin'ny fiezahana hanatratra an'i Etazonia, izay lasa tra-pahavoazana nohon'ny fikambanan'ny mpanao heloka bevava sy mpivarotra an-tsokosoko, izay maka tombony amin'ny fomba mamohehatra amin'ny alalan'ny fifehezana ny fandalovan'ireo olona ireo manerana an'i Amerika Atsimo, Amerika Afovoany ary Meksika.
Nifandray tsy tapaka tamin'ny governemantan'ny firenena voakasik'izany ny manampahefana Kiobàna, mba hitady vahaolana haingana sy mifanojo izay mitsinjo ny hahasoa ny olom-pirenena Kiobàna…
…Nanamafy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny fa ny olom-pirenena Kiobàna izay nandao ara-dalàna ny firenena sy manaraka ny lalànan'ny fifindra-monina amin'izao fotoana izao dia manan-jo hiverina any Kiobà raha maniry ny hanao izany izy ireo…
Nampian'ny governemanta Kiobàna fa “tra-pahavoazana ny mpifindra monina noho ny fampidirana politika amin'ny olan'ny fifindrà-monina nataon'ny governemanta Amerikana, tamin'ny alalan'ny Lalàna Fanitsiana Kiobàna ary, indrindra indrindra, ny fampiharana ny voalaza fa politikan'ny ‘tongotra lena – tongotra maina’.” Ny tsaho momba ny fahataperan'ny fifanarahana mikasika ny fifindrà-monina taorian'ny fifanatonana eo amin'ni Washington sy Havana dia afaka nanazava ny habetsaky ny isan'ny mpifindra monina.
Raha maro no mikaroka ny ‘coyotes’ mba hanatanterahana ity fandehanana ity, ny ankamaroan'ireo governemanta Amerikana Afovoany dia te-hijery ilay fomba hafa, miaraka amin'ireo manampahefana eny amin'ny sisintany izay manaiky kolikoly, manome taratasy fandalovana azo antoka na, fara faharatsiny, mihazona azy ireo mandritra ny andro vitsivitsy nefa tsy haverina any amin'ny tany niaviany.